Minisitry ny Fiarovam-pirenena : Tsy maintsy hosaziana ireo mandika lalàna -
AccueilSongandinaMinisitry ny Fiarovam-pirenena : Tsy maintsy hosaziana ireo mandika lalàna
Minisitry ny Fiarovam-pirenena : Tsy maintsy hosaziana ireo mandika lalàna
Tsy misy olona ambonin’ny lalàna, fa tsy maintsy hosaziana avokoa ireo rehetra mihoatra ny fefy eto amin’ny firenena, na mpitandro filaminana aza. Io no teny nambaran’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny jeneraly Béni Xavier Rasolofonirina, mahakasika ilay miaramila nikasi-tanana mpisolovava tetsy Antanimena. Araka ny efa fantatra moa dia efa nahavitana fanadihadiana ny momba iny raharaha iny, ary efa eny am-ponja ralehilahy.
Fantatra fa zanak’olona ambony, ary voalaza fa mpiambina ny jeneraly ny rainy ao amin’ny Primatiora. Tsy mahasakana ny mpitandro filaminana nanao ny fanadihadiana anefa izany, ka tsy afa-bela teo anatrehan’ny fitsarana ity farany. Manamarina ireny fa tsy ekena ny olona eo anivon’ny mpitandro filaminana manao fihetsika tsy mifanaraka amin’ny sata mifehy azy, na toa ny ahoana na ahoana ny fomba nanatanterahana izany, hoy ihany ny nambaran’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena.
Anisan’izany ny fahafantarana fa miray tendro amin’ny olon-dratsy izy ireo. Tsy nitsahatra nandrenesam-baovao tokoa mantsy tato ho ato fa voatonontonona matetika ny miaramila amin’ny asan-jiolahy mahery vaika, tahaka ny resaka fakana an-keriny, fanafihana mitam-piadiana teto amintsika. Efa maro no naiditra am-ponja vokatr’izany, ary tsy hitsitsy ireo tompon’andraikitra manam-pahefana ambony. Andrasana am-pitoniana ny tohin’ny raharaha, izay notsipihan’izy ireo fa tsy tokony hivoy ny fampitam-baovao tsy marina any amin’ny tambajotran-tserasera ny rehetra. Ity teknolojia iray izay efa miroborobo tanteraka moa dia matetika tsaho sy fanakorontanana saim-bahoaka fotsiny no mahazo vahana, indrindra amin’ny famafazana vaovao tsy marina. Ireo no votoatin’ny valandresaka tamin’ny mpanao gazety, nandritry ny famaranana ny fiofanana mahakasika ny serasera nomena ireo manam-boninahitra ambony, ary koa ny sivily, tamin’ny alalan’ny firenena amerikanina tetsy Soanierana, omaly. Nomena mari-pankasitrahana avokoa izy 25 mianadahy nandranto fiofanana sy traikefa momba ny serasera nandritry ny telo andro, niarahana tamin’ireo mpitandro filaminana amerikanina.
Nigadona teto Madagasikara omaly, ny Filohan’ny Repoblikan’i Inde, Ram Nath Kovind, sy ny vadiny, Savita Kovind, miaraka amin’ny delegasiona mafonja ahitana ny minisi-panjakana indianina misahana ny Fahasalamana, Ashwini Kumar Choubey, sy ireo parlemantera miisa efatra ...Tohiny